Ithegi: uhlalutyo lomsitho wokuhlalutya | Martech Zone
Maka: uhlalutyo lomsitho wokuhlalutya
Cofa indawo yokuKhangela: ukuKhangela ukuKhangela kuMsitho kwiNdawo engenaKhowudi
NgeCawa, ngo-Novemba 19, 2017 NgeCawa, ngo-Novemba 19, 2017 Douglas Karr
U-ClickTale ubenguvulindlela kwicandelo le-analytics, ebonelela ngedatha yokuziphatha kunye nokubonwa okucacileyo okuncedisa iingcali ze-ecommerce kunye ne-analytics ukukhomba kunye nokuphucula imiba eneendawo zabo. Umhleli omtsha weVenkile yeCofaTale ubonelela ngolunye uguquko, ngeendlela ezingenakhowudi zokudibanisa imicimbi kwindawo yakho yonke. Khomba nje kumcimbi wesiganeko sakho kwaye uchaze umcimbi ... CofaTale yenza okuseleyo. Ngomhleli woMboniso, iClicktale yenye yeenkampani zokuqala ukubonelela ngesisombululo ngaphakathi
Into ekufanele ukuba uyilandelela ukuSwashisha iiNjongo zakho zokuGuqula
NgoLwesine, Novemba 13, 2014 NgoMvulo, nge-9 kaJanuwari, 2017 UMax Kremer
Ezi ntsuku, phantse zonke izixhobo zohlalutyo phaya zikuvumela ukuba ulandele imicimbi yokucofa. Ukucofa kubonisa uninzi lonxibelelwano umsebenzisi analo kwindawo yakho. Kodwa xa unedatha, ngoku uza kwenza ntoni? Unokulandela umkhondo ngamnye onokuthi wenziwe lundwendwe, kodwa eso sisikhukhula sedatha oza kusihluza. Cofa umkhondo wokulandelela, xa usetyenziswa ngokufanelekileyo, inokuba sesinye sezixhobo ezinamandla zokuqonda ngokuchanekileyo indlela abantu abaphendula ngayo kumxholo wakho kunye nendlela